Nhengo dzeUighur Archives - Kodzero dzevanhu neChiedza Zvinyorwa na ∴ PixelHELPER Foundation
27 Dai 2016
Sticky post By Oliver Bienkowski On 27. May 2016
PixelHELPER inotsigira rusununguko rweUighurs, Hong Kong, Taiwan & Tibet
Am 29.07.2019/1/XNUMX isu tinoburitsa vhidhiyo yekutanga yechiyeuchidzo chedu muUighur mu #Marrakech, isu takanyora kumabepanhau ese eArab zvatakaita uye hatina mhinduro, takangopedzisira taudza mapepanhau kuti mutsetse wekutanga wechifananidzo ichi ndewevaJudha ngochani. chivako se "Holocaust Chirangaridzo cheMarrakech" munhoroondo yeMoroccan. Ruvengo rwakakunda kupesana nekubatana neMuslim Uighurs. Parizvino, hapana nyika yeMuslim munyika inotsigira maUighurs kusvika pamwero waunoda. Ndinovimba mumakore zana chiyeuchidzo chekutanga cheUighur Muslim Turkic vanhu chichava shanduko mukubatana kwenyika dzeMuslim nemaUighurs.
Dai maChinese akaparadza machechi chiuru, kutsamwa kweEurope kunenge kuri kukuru. Moto mune cathedra unogona kukanganisa kubatana kwepasi rese pano. 1000 mosque & chechi dzechiKristu dzakatoparadzwa muChina. Isu takapa maYeghur ese kuti aavake zvakare semakopi chaiwo kunze kwenyika kuitira kuti vagadzire kubatana kwevanhu vakadzvanywa veMuslim pasi rese. Nehurombo, maUngghur mazhinji anogara kumhanya kana kuChinese kudzidzisa makambi uye akapoterwa. Ndosaka tichiisa GoFundme fundraiser. Zvichienderana nekuti yakawanda sei yatinotora, tinovaka kana raibhurari, mosque kana guva.
China yakaparadza masisitadhi anopfuura chiuru, makuva & nzvimbo dzedenga mumakore matatu. Beijing yakarongeka inoparadza tsika uye chitendero cheMuslim Uighurs. Mifananidzo satellite inoratidza mufananidzo unotyisa. PixelHELPER achaita semuenzaniso uye kuvaka zvakare rakaputswa Iman Asim guva mumakomo eMoroccan aine danda rekuyeuka kuparadzwa kweChinese. Mamwe ruzivo nezve chirongwa
Tinoda demokrasi kuChina. Uye nyika dzega dzeYayoghur, Hong Kong, Taiwan & Tibet. Bato reCommunist rinofanira kupedzwa pakarepo. Chirevo chechiedza
Tinoda rusununguko rwechitendero muChina, kuremekedza kodzero dzevanhu uye sarudzo dzezvematongerwe enyika dzehupenyu huri nani. Misikiti yose inofanira kunge ichivakwazve nekudhura kweChina, zvose #Uiguren Unofanirwa kuva wakasununguka kuti udzidzise kutenda kwako.
Isu tinokumbira kusunungurwa kwakananga kweUighurs yese nekusanangurwa
yekusununguka kwechitendero kuChina. Munhu wose anogona kutenda zvaanoda, Flying Spaghetti Monster kana imwe yezvitendero zvenyika. China inofanira kumira vagari vayo kubva mukushandisa rusununguko rwechitendero. Mumutemo weGermany ndiyo rusununguko rwechitendero - iyo inofanira kutora mutemo weChinese semuenzaniso.
Campaign yevaMuslim veUighurs muChina / Kodzero dzevanhu May 6th, 2020Oliver Bienkowski